That's so good, right?: September 2015
သောကြာနေ့ သင်္ချာအတန်းချိန်ဝယ် စာသင်ခုံတွေရဲ့နောက်ဆုံးတန်းမှာ တိတ်တဆိတ် ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ ရစ်တာကိုသိပ်မခံရချင် တာကြောင့်ရယ် သိပ်ပြီးစိတ်မ၀င်စားတဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်တာကြောင့်လဲပါမယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ တစ်ခါဖူးမျှ မခံစားဖူးတဲ့ အချစ်စိတ်ကို စတင်တွေးတောစေခဲ့တဲ့ နေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် အကြောင်း ဆန်းစစ်တွေးဆချင်တာကြောင့်လည်း ပါမှာပေါ့လေ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ သူ့အသွင်အပြင်က တစ်ပါးသူကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ ၀တ်ချင်တာဝတ်ပေမယ့် ဖက်ရှင်တော့ကျပါတယ်။ ဆံပင်ပျော့ပျော့လေးတွေက မရှည်တရှည် ဝေ့၀ဲလို့ လမ်းလျှောက်များသွားရင်လေ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ပိန်တယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ်ကြံ့ခိုင်သော ကြွက်သားများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ရယ်မြူးနေဟန်သူ့မျက်ဝန်းတွေကလည်း သူ့အကြောင်းကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်ထား လောက်အောင်စွမ်းပါတယ်။ ပထမနှစ် Freshman ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ အတန်းကကျောင်းသားဘောလုံးအသင်းမှာ ကပ္ပတိန်လုပ်ခဲ့တာ အခုအချိန်ထိပါပဲ။ နက်မှောင်သော ဆံနွယ်တွေ၊ မျက်ဝန်းနက်နက်တွေ…ကြံ့ခိုင်သော ခန္ဓာကိုယ်ရယ် အမြဲလိုလို လန်းဆန်းတက်ကြွနေတော့တာ။ ကျွန်တော်သည်လည်း ပိန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ သူ့လိုကြွက်သားတွေ နဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး အသားဖြူတော့ ပိုးဟပ်ဖြူလို့ခေါ်ကြသလိုလေးပါ။
သူ့ကိုချစ်စိတ်ဝင်မိခဲ့တာက လူပျိုဖော်ဝင်ပြီးစ ၈တန်းနှစ်လောက်ကတည်းကပါဆိုတော့ သူ့ကိုအကြွင်းမဲ့ နှစ်သက်စွဲလမ်း ခြင်းနဲ့ နေထိုင်ခဲ့တာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ သူ့အကြောင်းပြောပြရရင် အဦးဆုံးသတိထားမိမှာက ကြင်နာတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် အဲ…ဘောလုံးအားကစားသမားတစ်ယောက်လို ယောက်ျားပီသပြီး မာထန်နေတဲ့ပုံစံက အံ့သြလောက်အောင် ကြင်နာတတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပေါင်းရသင်းရတာကောင်းတယ် Friendly ဖြစ်တယ် သက်သောင့်သက်သာရှိသလိုခံစားရတယ်၊ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အဲ့ပုံစံဆိုပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ ငါသိငါတတ် လုပ်တတ်သလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ဆို သူ့ကြောင့်အမြဲလို ရယ်မောပျော်ရွှင်နေရတတ်တာ။ သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တင် ရင်ထဲ မြူးသွားသလို ခံစားရပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကမ္ဘာပါ။ သူ့ကိုနမ်း…..ကိုယ်နံ့လေးကိုရှူရှိုက်….အာ….အဲ့အတွေ့အကြုံ လေးရရင်ဖြင့် တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရလောက်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့အရူးထနေခြင်းဟာ ကျောင်းဆင်းခေါင်းလင်းထိုးသံကြောင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုးထခဲ့ရပါတယ်။ ရှေ့က ဆရာက လည်း အိမ်စာ Assignment တွေကိုလုပ်ခဲ့ဖို့ အတန်းထဲကထွက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကို အော်ပြီး ပြောနေပါရဲ့။ နေမျိုးအောင် ကို ကျွန်တော်က နေမျိုးလို့ခေါ်တာဗျ။ သူ အတန်းထဲကထွက်မသွားဘဲ ကျွန်တေ်ာ့ရှိရာကို လှမ်းလာပြီး ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ `ငါ ဆရာနောက်ဆုံးသင်ခဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကို နားမလည်ဘူးကွာ တွက်တတ်ဘူး´ `မင်းတွက်ပြမယ်မဟုတ်လား? အဲ့တာနားမလည်ရင်တော့ လာမယ့်အပတ်မှာဖြေမယ့် Test တော့ကျမှာဗျ´တဲ့။ ကျွန်တော် နှစ်ခါမစဉ်းစားပါဘူးအဖြေပေးဖို့။ ဒါပေမဲ့ အဖြေပေးဖို့အလျင်မလို မိအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းကာ လေသံကိုအေးဆေး လုပ်လိုက်တယ်။ `အေး…နက်ဖြန်ဆိုရမလား ၁၀နာရီဝန်းကျင်လောက်လေ၊ ငါတို့ တနေကုန်စာလုပ်လို့ရတယ် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုလုပ်ကြမယ်လေ´ သူ့သွားစွယ်ဖွေးဖွေးတွေ ပေါ်တဲ့အထိပြုံးတယ်ဗျ။ `အဆင်ပြေသား´ဆိုပဲ။
စင်စစ်တော့ ကျွန်တော့်အိမ်လေးရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေမြင်ကွင်းမျိုးကို သူ့ကိုမမြင်စေလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေမျိုးအနေနဲ့ မှတ်မိကောင်း မှတ်မိမယ့် ကျွန်တေ်ာတို့အိမ်ရဲ့ပုံရိပ်လေးက ခပ်သေးသေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြင်အဆင်လေးပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သူ ငယ်ငယ်တုန်းက တစ်ခါတလေလာလည်ခဲ့ချိန်ကိုပေါ့။ အခုတော့ ရှုတ်ပွနေပြီး တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ယိုင်နဲ့နေပြီ။ အလုပ်အကိုင်မရှိ အရက်သောက်တတ် တဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်ရဲ့ပဲ့ကိုင်မှုကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မတော်တဆကားတိုက်မှုကြောင့် ကျွန်တော့်မေမေဆုံးသွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဖေဖေတစ်ယောက် အရက်ကို တော်တော်သောက်တော့တာပါပဲ။ သူတည်ထောင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းကိုဦးစီးဦးဆောင်မလုပ် နိုင်တော့တဲ့အထိပါ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားစားသောက်နေနိုင်သေးတာက ဖေဖေ့ညီရဲ့ဖေးမမှုကြောင့် ရှယ်ယာအချို့ရဲ့ဝင်ငွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း အိမ်တံခါးလေးကိုဖွင့်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲဖြတ်ကာ ၀င်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းအော်နေပါရဲ့။ ကျွန်တော် ကျွန်တော် ချစ်ရသောသူကို ဒီမြင်ကွင်းမျိုးမမြင်စေချင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည့်စုံချမ်းသာလှတဲ့ သူ့ကိုပေါ့။ သူ့မိဘတွေက တော်တော်ကောင်းတဲ့ အိမ်ကျယ်ကြီးတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်….ချစ်စရာခွေးလေးတစ်ကောင်ရယ်…..ကျေနပ်ဖွယ်အလုပ်အကိုင်တွေပိုင်ဆိုင်ကြတယ်….တကယ့် လူတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့အတော်ကံကောင်းကြတာပဲဗျာ။
အိပ်ယာပေါ်မှာ အသာလေးငြိမ်ပြီး ခဏတာအနားယူမိပါရဲ့။ ညာဘက်ခြမ်းက တော်တော်ကိုနာနေတာ။ မနက်ဖြန် ဟုတ်တယ် မနက်ဖြန် အကြောင်း ကျွန်တော့်အတွေးထဲရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် တွန့်ဆုတ်မိတာလည်းမဖြစ်မိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ပြည့်နေသလိုပါ။ ဒီကောင်လေးက ကျွန်တေ်ာ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာ အလယ်တန်းလောက်ကတည်းကပဲလေ။ ကျွန်တော် သူ့ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ….ကျွန်တေ်ာ့ ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်မှုနဲ့အပြိုင် သိချင်စိတ်တွေပြင်းထန်လာမိပါတယ်။ အခုလေးမှ လက်ခံရရှိထားတဲ့ လက်သီးနှင့် ထိုးနှက်ချက်ကြောင့် နာကျင်မှုဟာ နက်ဖြန်မှာ ကြုံဆုံရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုကပေးမယ်ထင်ရတဲ့ နာကျင်မှု ထက်ဆိုးရွားနေလား…အိုး…။
စာကြည့်စားပွဲခုံပေါ်က မသုံးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Laptop လေးကိုအသာဖွင့်ကာ အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က အချို့သောသူငယ်ချင်းများစီက အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ရကောင်းရနိုင်တာပဲမဟုတ်လား။ ဒီ chatting website ကိုတွေ့ခဲ့တာတော့ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော့် screen name – ej08 နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးနောက် ညာဘက်ကော်လံမှာရှိတဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Chat rooms များထဲမှ gay teen chatroom ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ဟော….ကျွန်တော့်ရဲ့အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်း ‘behind_closed_doors90’ ကိုတွေ့လိုက်ရပြီပေါ့။ တစ်ယောက်တည်း အပေါင်းအသင်းသိပ်မရှိတဲ့ လူတွေအတွက် ခေတ်ပေါ်နည်းပညာ အချို့က အကူအညီတော့ပေးနိုင်သားပဲလေ။ ကျွန်တော် သူ့နာမည်လေးကို ကလစ်ခေါက်ကာ private message window တစ်ခုခေါ် လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တေ်ာတို့ ခဏလေးတော့ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ဆက်ပြောဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော် logged off. အခု နည်းနည်းတော့ စိတ်တည်ငြိမ်သွားရပြီ။ သူပြောတာဟုတ်တယ်။ နေမျိုးဟာ ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်အဖြစ်သဘောထား တယ်ဆိုရင် ကျွန်တေ်ာ့ခံစားချက်ကို သူလက်ခံနားထောင်ပေးမယ် နားလည်ပေးမှာပါ။ ဟိုသည်တွေး ဒုက္ခခံနေတာထက်စာရင် ဘာမှမထူးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်အစား သူ့ကိုလက်လွှတ်လိုက်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းလေးက လွယ်ကူစေမယ်ထင်ပါရဲ့။ သူ့ကိုဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင် တော့ ချစ်နေရပြီးမပိုင်ဆိုင်ရမယ့် နာကျင်မှုဟာ တော်တော်နာလိုခံခက်ဖြစ်မှာပါပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ နေမျိုး ကျွန်တော့်ကို ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် သဘာဝကို လက်ခံလိမ့်မယ် ဆိုတာကို အလိုလိုသိနေသလိုပဲဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာဘယ်လိုလူစားဆိုတာ မြင်တွေ့နေရပြီး ကျွန်တော့်ချစ်စိတ်တွေကို နိုးကြွစေတဲ့ ကြင်နာတတ်သူမဟုတ်လား။
မနက်ခင်းဟာ ကန့်လန့်ကာဆွဲဖွင့်လိုက်သလို ရုတ်တရက်ရောက်လာပါတယ်။ ခုတင်ဘေးက နှိုးစက်နာရီက ဆိုးဆိုးရွားရွားထအော်တာ များလန့်တောင်လန့်ရော။ အိပ်ယာပေါ်ကထဖို့ ညာဘက်ကိုစောင်းလိုက်တာ မနေ့ကအထိုးခံထားရတဲ့ဒဏ်က အကင်းမသေသေးဘူး။ ခပ်မြန်မြန်လေးထ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သွက်သွက်ကလေးလုပ်လိုက်ပါတယ်။ မနက်ခင်းတိုင်း မိနစ် ၂၀မကြာတဲ့ ကျင့်သားရနေ တဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးပေါ့နော်။ ခါတိုင်း မနက်ခင်းတွေနဲ့မတူ ဒီနေ့တော့ အတွေးထဲ တရစ်ဝဲ၀ဲလည်နေတဲ့အကြောင်းလေးက ရေခဲတုံးကို လက်ဗလာနဲ့အချိန်ကြာကြာကိုင်ထားရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ထားပါတော့ ကျွန်တော် အိပ်ယာ နဲ့ အခန်းလေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် သန့်ရှင်းလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ ရေပန်းကနေ တဖွားဖွားကျလာတဲ့ ရေများ ကျွန်တော့်အရေပြားပေါ်ကျရောက်နေတဲ့ ခံစားမှုက အရာရာကလွတ်မြောက်နေသလိုခံစားရပါရဲ့။ အဲ့လိုအချိန် ဘာမှန်းကိုမသိဘူး ရင်ထဲ တလှိုက်လှိုက်ပျော်ရွှင်လာကာ တခစ်ခစ် ရယ်မောမိပါတယ်။ အခြားသော ဆယ်ကျောက်သက်များလိုပါပဲ ရေချိုးနေရင်းတန်းလန်းမှ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲ ခုန်ချမိပြန်ရော။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝယ် ဘယ်လိုအကြောင်းအရာ ဘယ်လိုကိစ္စတွေက နေမျိုးကို အချစ်စိတ်ခံစားတတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ့။ အိုး….စိတ်ကူးယဉ်တာလဲ ယဉ်တာပေါ့ လက်တွေ့အပြင်မှာတော့ တဖွားဖွားထနေတဲ့ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေက ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို နုညံ့စွာထိတွေ့နေတာများ….သူ ဆွတ်ဖြန်းလာတတ်တဲ့ ရေမွှေးအနံ့လေးလို ပူနွေးရှိန်းမြနေသလိုပါပဲ။ ပွတ်သပ်မိတဲ့ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး သူ့လက်အစုံရောက်နေသလိုပဲ….အာ….လည်တိုင်လေးကိုသူ နမ်းတာများ တပ်မက်မှုအပြည့် အင်း….အာ။ တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်တဲ့ သူ့လက်အစုံဟာ သန်မာလိုက်တာများ…ဟိ။ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ပါဘူး ပေါင်ကြားက မတ်ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်နဲ့အသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ကစားမိပါပြီ။ ဒါဟာ စိတ်ကူးနဲ့ရူးနေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် တင်ပါးတွေကို လှုပ်ရှားကစားစေတဲ့ပြုမူမှုတစ်မျိုး ဖြစ်စေပါရဲ့။ နေမျိုးရဲ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံစီကိုများ ပွတ်သပ်ပြီး ငပဲကို သူ့လက်ကြီးနဲ့ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်….အာ…အ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး သုက်ရည်တွေကို ရေချိုးခန်းနေရာအနှံ့ကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိပါပြီ။ ပူနွေးနေတဲ့သုက်ရည် တွေဟာ ကျွန်တော့်လက်တွေထဲမှာရှိန်းမြနေစေရော။ ရှက်တော့လည်း ရှက်မိပါတယ်….ကိုယ့်စိတ်ထဲက ချစ်စိတ်ဝင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်သယောင်စိတ်ကူးယဉ်မိတာကိုလေ။ ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူး ကောက်ချက်မချနိုင်ပေမဲ့ နေမျိုးကို ကျွန်တော် တကယ်ချစ်နေမိခြင်းဖြစ်မယ်လို့ ထင်တာပါပဲဗျာ။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ရေတွေတဖွားဖွားနဲ့ သန့်စင်လိုက်ပြီးနောက် ၀တ်နေကျ အ၀တ်အစားတွေထဲကမှ နည်းနည်းပိုကြည့်ကောင်းမယ့် ဒီဇိုင်းကိုရွေးဝတ်လိုက်ပါတယ်။ နက်မှောင်နေသော အပြာရင့်ရင့်ဂျင်းဘောင်းဘီရယ်…အနက်ရောင်ဖျော့ဖျော့ တီရှပ်လေးရယ်ပေါ့။ တန်ဖိုးကြီးရေမွှေးဆွတ်ဖြန်းချင်ပေမယ့်….အင်း….ရှိတာလေးပဲဆွတ်ဖြန်းလိုက်ကာ ကျွန်တော့် Notebooks တွေကိုဆွဲယူလိုက်ရင်း အိမ်တံခါးကို ပိတ်ပြီးထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ လက်မှာပါတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်နာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ 10း43မိနစ်ရှိပြီ။ နေမျိုးနဲ့ ကျွန်တော် သဘောတူထားတာက ကျောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်က ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ သူ ကျွန်တော့်ကို 113း0နာရီမှာလာခေါ်မယ်ပေါ့။ ကော်ဖီဆိုင်ကိုရောက်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေသွက်လိုက်ပေမယ့် 25 minutes လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဗျာ။ ရောက်လည်းရောက်ရော အချိန်နည်းနည်းလိုသေးပေမယ့် နေမျိုးက ရောက်နှင့်နေပြီဗျ။
သူက တကယ့်ကိုသန့်ပြန့်နေတာပဲဗျာ….ကာကီရောင်ဘောင်းဘီရယ် ကော်လံပါတဲ့ရှပ်တစ်ထည်ရယ်ဝတ်ထားပြီးတော့ Cappuccino တစ်ခွက်သောက်နေတယ်။ ကျွန်တော်လာနေတာကိုလည်းသူမြင်ရော ပါးချိုင့်လေးပေါ်အောင်ပြုံးပြရော။
`ဟေး…ဇော်သူ! တော်သေးတာပေါ့ ငါရောက်တာလည်းမကြာသေးဘူးကွ´လို့ပြောလည်းပြော ကျွန်တော်ထိုင်ဖို့နေရာကို အမူအယာနဲ့ ညွှန်ပြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နှစ်လိုစွာပြုံးမိရရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အသာထိုင်လိုက်ကာ တစ်ခုခုတော့ စားမှပဲလို့ အာရုံကပ်မိပါရဲ့။ `မင်း ဘာစားမလဲ?’ နေမျိုးကမေးတယ်။ အဲ….သူဂရုတစိုက်မေးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုစောင့်နေမိတာပါ။ အင်း…ဘာမှမစားတော့ပါဘူးလို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးငြင်းလို့ကလည်းမကောင်းနော်။ `ဟ လုပ်ပါဟ..ဘာစားမလဲ´ သူ တခစ်ခစ်ရယ်လိုက်ရင်း ပြုမူနေကျ မျက်စိတစ်ဖက် ဖျက်ကနဲမှိတ်ပြတယ်။ သူ သက်ပြင်းလေး အသာချလိုက်ရင်း စားပွဲထိုးကို Pancakes နဲ့ လိမ္မော်ရည်ကိုနှစ်ယောက်စာမှာလိုက်တယ် လေ။ ကျွန်တော်သည်လည်း သက်ပြင်းမောလေးချမိတာပေါ့။
`မင်း….ရောက်လာရင် ငါ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်နေတော့တာနော် ငါ့ကောင်´ မျက်ခုံးလေးတစ်ဖက်ကို မသိမသာကုတ်ခြစ်လိုက်ရင်းနေမျိုးကပြောတာ။ `မင်း ငါ့ကိုစာရှင်းပြဖို့ အချိန်ရရဲ့လား အဆင်ပြေတယ်မဟုတ် လား ငါ့ကောင်?’
သူ့ဆံနွယ်လေးတွေ လှုပ်သွားတာကို ကျွန်တော်ငေးမိရရင်း ပါးပြင်တွေနွေးလာမိသလိုပဲ။ အိုး….တော်သေးတယ် စားပွဲခုံကကြီးလို့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံက ဘောင်းဘီကြီးရုတ်တရက်ဖောင်းကြွလာတာကို ဖုန်းကွယ်ထားနိုင်တာ။
`အခု မင်းကို ချောက်ကမ်းပါးစွန်းထိရောက်အောင် ပို့ပေးမယ်´ သူ ကျေနပ်မိန့်မူးစွာပြောပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲ သွင်းနိုင်သမျှ အဆုံးထိဖိသွင်းတာများ သူ့လည်မျိုနံရံတွေနဲ့တို့ထိမိတဲ့အထိပါ။ သူ အော့အံမှုဖြစ်သလို ခံစားမှုမျိုးကို ကောင်းကောင်း ထိန်းနိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို အထုတ်အသွင်း အဖိအဖော့နဲ့ ပါးစပ်ထဲကစားနေတာ နောက်ဆုံး ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လျပ်စီးတွေ တဖျက်ဖျက်စီးဆင်းသွားသလို ပူနွေးတဲ့သွေးတွေ ဖြန်းပက်လိုက်သလို ကျေနပ်တဲ့ခံစားမှုအစွန်အဖျားကို ရောက်သွားရရင်း ကျွန်တော့် သုက်ရည်တွေကို ဘယ်တုန်းကမှ ပန်းမထုတ်ဖူးလောက်တဲ့ပမာဏနဲက ပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ အားလုံး ဟုတ်တယ် အားလုံးကို အလဟဿ မဖြစ်လောက်အောင် အကုန်မျိုချပစ်တယ်လေ။ ကျွန်တော့် ညည်းသံ ခပ်တိုးတိုးလေးသာ ထွက်နိုင်ပါရဲ့။
`ခပ်ပြင်းပြင်း…အား….မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးကွာ…ငါမနေတတ်တော့ဘူး´ ကျွန်တော် အသက်ခပ်မြန်မြန်ရှူရှိုက်မှုတွေရဲ့ကြားအဲ့ဒီ စကားကို ပြောလိုက်မိပါတယ်။ သူကလည်း ကျွန်တော့်ပြောတဲ့အတိုင်း တဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီးလုပ်တယ်။ သူ့ရဲ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေ ဟာ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေ မြန်သထက်မြန်လာသလိုပါပဲ။ သူ့ရွှေဥတွေက ကျွန်တော့်ခရေ၀တွေကို ရိုက်ခတ်တဲ့အသံကိုတောင် ကြားရတယ်ထင်ပါရဲ့။
သူ့ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံး ချွေးစေးတွေပြန်စပြုလာပါပြီ…..သူ့မျက်နှာလေးဟာလည်း သွေးရောင်လွှမ်းစပြုလာသလို … သူ့မျက်လုံးတွေဟာလည်း မှေးမှိတ်ထားကာ အခုသူခံစားနေရသော အထိအတွေ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေကို ကျေနပ်သာယာကာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ကာယနှီးနှောတဲ့ချစ်ခြင်းမှာ သဘောကျပုံပြဆိုနေတယ်ပေါ့နော်။ သူ့ပါးပြင်က ချွေးနံ့နဲ့အတူရောလာသော ကိုယ်သင်းနံ့လေးကိုတောင် ခံစားရရှိနေသလို မိန့်မူးမိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆောင့်သွင်းချက် ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်အပြီးမှာတော့ သူ့နှုတ်ဖျား က ခပ်အုပ်အုပ်အော်သံလေးတစ်ချက်ပေါ်လာကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကို ကော့ကော့ပြီး သူ့သုက်ရည်တွေကိုပစ်သွင်းလိုက်ပါတော့ တယ်။ သူ့ရဲ့ ချစ်စဖွယ် နှစ်သက်ဖွယ် အသွေးအသားတွေဟာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့သွားသလိုပဲ ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ခံစားလိုက်မိသလိုပါလေ။ ကျွန်တော်သည်လည်း စိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အမြင့်ဆုံးဆိုသည့်ခံစားမှုမျိုး သူနဲ့မရှေးမနှောင်းရလိုက် ကာ အိပ်ယာပေါ်ဝုန်းကနဲလဲကျပါရော။ ကျေနပ်သည်ဆိုသော ခံစားမှုအဟုန်ဟာ နှစ်ဦးသားအပေါ်လွှမ်းခြုံနေတာများ စကားမပြောနိုင် အတန်ကြာငြိမ်သက်နေမိကြတဲ့အထိဆိုပါတော့။ နေမျိုး သူ့ငပဲကိုအသာဆွဲချွတ် ကွန်ဒုံးကို အိပ်ယာဘေးက တစ်ရှူးဘောက်စ်က တစ်ရှူးအနည်းငယ်ကိုလှမ်းယူကာ ထွေးပတ်လိုက်ရင်း အမှိုက်ခြင်းလေးထဲချ ကျွန်တော့်နံဘေးကို အသာအယာလှဲအိပ်လိုက်ပါတယ်။
နှစ်ဦးသားရဲ့ပူပြင်းနေသောခန္ဓာကိုယ်တွေကို ရေပန်းအောက်မှာ အချိန်တော်တော်ကြာထားရင်း သန့်စင်လိုက်ကြပါတယ်။ နေမျိုးနှင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန် သန့်စင်စေတယ်….ခြောက်သွေ့မွှေးပျံ့စေပါတယ်လေ။ သူ ကျွန်တော့်ကိုယ် အနှံ့ တဘက်နဲ့သုတ်ပေးနေရင်းမှာ နံရိုးနားက သွေးခြေဥတာလေးကိုအမြင်မှာတော့ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းမှာစိုးရိမ် သောအကြည့်တွေနဲ့အတူ `ဒါ ဒါ မင်းကိုဘယ်သူလုပ်ထားတာလဲကွ´မေးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့လက်လေးကိုအသာဖယ်လိုက်ရင်း `ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ….ငါချော်လဲထားလို့ထိထားတာ´လို့လိမ်လိုက်ပါရဲ့။ အခုလို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေချိန်မှာ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး။ `ငါ…ငါ ချော်လဲထားတာ….´
Baby လို့ခေါ်လိုက်သံလေးက ကျွန်တော့်ကို အရည်ပျော်သွားစေပါတယ်။ နေမျိုး သူ့လက်မောင်းအစုံနဲ့ ကျွန်တော့်ခါးကိုရစ်သိုင်းပွေ့ ဖက်လိုက်ရင်း `ကိုယ် ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ဘေဘီ့ကိုနာကျင်အောင် လုပ်ဖို့ခွင့်မပြုတော့ဘူးနော်၊ ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆို တာလေးကို ပြောရုံလေးပဲပြောပြကွာ´ ကျွန်တော့်နားရွက်နားကို တကယ်တိုးတိုးလေးကပ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေ တလှိမ့်ချင်းစဆင်းရပါပြီ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရနိုင်ခဲ့ဘူးလေ…´ဖေ…အဖေက ထိုးထားတာ….အိုကေ? သူက တစ်ချိန်လုံး လိုလို အရက်သောက်နေတတ်တာလေ၊ သူ့စိတ်ထဲမှာ အလိုမကျရင် အကြောင်းပြချက်သိပ်မရှိဘဲ လက်သီးနဲ့ထိုးတာ၊ အဲဒါပဲ….ကြားရ တာ ဘယ်လိုနေလဲဟင်?’
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများက မျည်ရည်ချောင်းစီးပါပြီ။ ကျွန်တော် ဒေါသတကြီးနဲ့ ရေချိုးခန်းနံရံကိုလက်သီးနဲ့ ထိုးပြီး ဒေါသပေါက်ကွဲဖို့ဟန်ပြင်တော့ နေမျိုးကလှမ်းဆွဲလိုက်ကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲကို ဆွဲဖက်လိုက်ပါတယ်။ `ငါ အဲ့တာကို သိပ်မုန်းတာပဲ´
`ကဲ…မင်း နောက်ဆုံးတော့လည်း နိုးလာပြီပေါ့။ မင်း ကောင်းကောင်းအနားယူနိုင်တာကို ကိုယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကွာ´
သူ ကျွန်တော့်အိမ်ကို ကားတန်းတန်းမတ်မတ်မောင်းပြီးလိုက်ပို့တယ်။ အိမ်ကိုလည်းရောက်ရော ဘယ်လို အံသြဖို့ကောင်းမယ့် Weekend ဖြစ်မလည်းလို့ သံသယတော့ဝင်ခဲ့မိပါတယ်။ ကျွန်တော် နေမျိုးကို နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် အိမ်ထဲကို ခပ်ဖြေးဖြေး လျှောက်ဝင်လိုက်ရော။ အို….တစ်အိမ်လုံးလည်း သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဖေဖေ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ်မှာ ငြိမ်ပြီး သတင်းစာဖတ်နေတယ်။ မမြင်ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရသလိုပါပဲလေ….သန့်ပြန့် ရှင်းသန့်နေတာများ အမွှေးအမျှင်တွေကိုရိတ်ပယ်….ရေမိုးချိုးပြီး မွှေးကြိုင်နေတာ။ သူ ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ ရုတ်တရက်ထလာကာ ကျွန်တော့်ကို ထွေးဖက်ပါတော့တယ်။
မေမေသေတဲ့အချိန်တုန်းကတည်းက မငိုခဲ့တဲ့ဖေဖေဟာ အခု စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံမကျယ်ပါဘူး ခပ်တိုးတိုးရှိုက်သံ နှင့်အတူ မျက်ရည်တွေ တလှိမ့်ခြင်းကျဆင်းရုံပါပဲ။ `ဖေဖေ ဘယ်တော့မှ အရက်မသောက်တော့ဘူး´
ကတိစကားဆိုပါတယ်။ `ပြီးတော့ စီးပွားရေးကိုလည်း ဆထက်တိုးပွားအောင် ပြန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်တော့မယ် ဟုတ်ပြီလား သား´
Note: စာအသစ်လေးတွေရေးဖို့အချိန်လည်းမရ အခြားစာတွေလည်းမရေးဖြစ်တဲ့ကာလမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများဖတ်ဖို့ တစ်ခုခု ပြန်တင်ချင်တာနဲ့ The Dream နာမည်ပါတဲ့ ၀တ္ထုလေးတွေပြန်တင်ဖြစ်နေတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ အပျင်းပြေစေလိုရင်းဖြစ်တာကြောင့် သည်းခံဖတ်ပါဦးလို့နော်။